6 Arrimood Oo Sabab U Noqon Kara In Ninku Naco Xaaskiisa (Gabaryahay Iska Ilaali) - Aayaha
Aayaha editorJanuary 29, 2019
Waxaa jira arrimo badan oo raga ay ku nici karaan haweenkooda, Shabakadda arrimaha Bulshada Aayaha, ayaa idiin soo xushay qaar kamid waxyaabaha ugu daran ee aysan raggu ka kaftamin isla markaana haweenkooda ku nacaan.
Way adagtahay inaad aragto nin aanan naceynhaweeney qeylo u saaxiib ah. Qeylada waa dabeecadda ugu xun ee aanan wanaagsaneyn oo haweeney ay la timaado.
Haweeney kasta oo qeylo badan way ku adkaaneysaa inay heysato nin. Qeylada waxay sababeysaa inuu seygaaga ku naco oo uu guriga ka cararo isla markaana uu raadsado haween kale.
Ma jiro nin jeclaan lahaa in lala meel dhigo nin kale,iyadoo arrinta layaabka leh ay tahay in gabdhaha ay taasi isticmaalaan.
Barbardhigga waa fariin jahwareer ah oo qalbiga ninkaaga ku abuureysa inuu ninka kale uu ka wanaagsanayhay. Inaad seygaaga la meel dhigto nin kale waxat dileysaa dareenka uu kuu qabo.
3. Xushmad la’aan
Haweenka badanaa waxay qiimeeyaan waxyabaaha waaweyn iyadoo aanan qiimeyn waxyaabaha yar yare e uu ninkooda u sameeyo.
Cabashada iyo inaad noqoto qof aanan qiimeyn qadarin lahayn waxay keeneysa in ninka uu ku naco; Haddii aad nin ku qiimeyso waxyaabaha uu kuu sameeyo, wuxuu kuu arkayaa boqorad balse haddii aadan lahayn ixtiraam kama labalabeynaayo inuu daaqadda kaa saaro.
4. Faham la’aan
Marka haweeney aysan fahmin ninkeeda, xiriirka waxa uu noqonayaa mid lulmanaya. Raggu waa jecelyihiin xaasaskooda marka ay yihiin kuwa fahma; haweeney aanan fahmin ninkeeda waxay dhaleeceysaa ficil kasta uu sameeyo taasoo jacaylka u bedesha nacayb.
5. Ka mashquulidda ninkaaga
Raggu waa kuwa neceb marka ay haweenkooda ka mashquulaan; inaad sameyso isku dheeli tirnaan u dhexeysa shaqada iyo ninkaada waa mid aad ku ilaalsan karto kuna soo jeedsan karto seygaaga.
6. Haweeney amar badan
Ragga qaar oo kaliya ayaa u dul qaadan kara haweeney amar badan. Haweeney amar badan waa tan sameysa waxay rabto iyadoo sidoo kale rabta in ninkeeda uu sameeyo waxay rabto oo kaliya.
Dhaqanka noocaas ayaa ah ugu dambeyn keenaya in ninka uu kaa daalo isla markaana ku naco.